Global Voices teny Malagasy » Mampiseho ny fomba fampiharana ny fitsipiky ny sivana any Shina ny lalao vaovao ao amin’ny Tencent · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Mey 2019 5:19 GMT 1	 · Mpanoratra The Stand News Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fanampenam-bava, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Navoaka  tao amin'ny Stand News tamin'ny 8 May 2019 ny dikanteny Shinoa amin'ity lahatsoratra ity .
Ny 8 May, namoaka lalao finday vaovao mitondra ny lohateny hoe “Game for Peace”  (和平 精英) (lalao ho an'ny fandriampahalemana) tao amin'ny Weibo ny orinasa goavan'ny aterineto ao Shina, Tencent.
Tamin'ny taona 2017, dia nahatanteraka ny fahazoana ny zo hamoaka ny PUBG izay navoakan'ny PUBG Corporation, rantsan'ny orinasan'ny lalao video Koreana Tatsimo Bluehole any Shina ny Tencent. Saingy nanakiana ny lalaon'ady  ny Sampan-draharaham-panjakana misahana ny Gazety, ny Fanontam-pirinty, ny Onjam-peo, ny Sarimihetsika ary ny Fahitalavitra (SAPPRFT) fa fanitsakitsahana ny “soatoavina fototra sosialista” sy fanimbana ny tanora izany.
Tamin'ny volana Martsa 2018, nanapa-kevitra ny hanatsahatra ny famoahana  ireo fahazoan-dàlana ara-barotra ho an'ny lalao amin'ny aterineto sy ny finday rehetra ny mpandrindra, ka nampiato ny ankamaroan'ny lalao mba tsy hahazo tombombarotra ao amin'ny tsena Shinoa. Navoaka tamin'ny endrika andrana tsy ara-barotra ny sasany tamin'ireo lalao ireo, toy ny PUBG, sady niandry fankatoavana ny fahazoan-dàlana .
Nanomboka namoaka fahazoan-dàlana amin'ny lalao indray tamin'ny volana lasa teo ireo mpandrindra, ary nampiditra fitsipika vaovao  ihany koa, izay mitaky ny lalao amin'ny aterineto sy ny finday rehetra hifanaraka amin'ny soatoavina fototra sosialista. Mandràra ny karazana votoaty toy ireto manaraka ireto avy amin'ny lalao rehetra ihany koa ny fitsipika ho an'ireo mpilalao ao amin'ny tanibe Shina:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/16/138616/
 “Game for Peace”: https://www.weibo.com/7095404909/HtcCCllxG?type=comment#_rnd1557362886956
 nanakiana ny lalaon'ady: https://www.vg247.com/2017/10/31/as-playerunknowns-battlegrounds-passes-17-million-sales-game-could-face-a-ban-in-china/
 hanatsahatra ny famoahana: https://www.reuters.com/article/us-china-games/china-releases-new-rules-on-game-approvals-idUSKCN1RW07F
 fitsipika vaovao: https://gizmodo.com/chinas-new-video-game-rules-officially-ban-blood-corps-1834221957